Mmetụta ihe mgbochi na-emepụta ihe anọ dị egwu iji wepụ ibe weebụ
GitHub bụ usoro ihe ntanetị nke weebụ ; a na-ejikarị ya eme ihe maka Kọmputa ma na-enye njikwa koodu isi (SCM) ọrụ na ndị ọrụ ya. Ọ na-enye gị ohere ịnweta ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ibe weebụ ma kpochapụ ha dịka ọ bụla ị chọrọ. GitHub na-enye ndokwa maka ma ihe nzuzo na-enweghị ihe ọ bụla. Ị nwere ike ịmalite ọrụ dịgasị iche iche nke data na ngwá ọrụ a - computer repair san francisco california. GitHub ekwuola na ọ na-ese ihe karịrị nde weebụ 40 ma rụọ ọrụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde mmadụ 10 n'ụwa nile.
Mpekere anọ iji kpochapụ ibe weebụ:
1. Gọọmentị Google Plus:
Google Plus Authorship bụ WordPress ngwa mgbakwunye na nza nke atụmatụ na ike. Na ya, ị nwere ike ibelata ọtụtụ ibe weebụ dịka ịchọrọ. Nke mbụ, ị ga-achọpụta ma chọpụta weebụsaịtị ndị ịchọrọ iwepụ. Nzọụkwụ ọzọ bụ ịkọwa data ma ọ bụ tinye URL nke saịtị ahụ, ma ka ngwa mgbakwunye a rụọ ọrụ ya. Enwere ike itinye ya na GitHub ma kpochapụ ya ruo puku ise ibe weebụ n'otu awa, na-enweghị mmebi na àgwà. Ọzọkwa, ihe mgbakwunye a na-enye anyị ohere ịgbakwunye foto profaịlụ G + maka nsonaazụ ọchụchọ, nye ndị edemede dị iche iche aka ma gosi na ha bụ eziokwu. Ọ nwere interface enyi na-arụ ọrụ na nwere ike wepụ ihe a na-apụghị ịgwọta na nke a na-apụghị ịgụta ọnụ maka gị.
2. Oge Nri:
Nri Ntanya bụ otu n'ime WordPress plugins. Okwesiri maka obere ulo oru ndi ozo na ndi na-aru ndi mmadu. Ọzọkwa, nkwụsị nri na-eburu ọdịnaya, debe ya, ma na-ebipụta ya na njirimara kwesịrị ekwesị, ekele ya na bots na crawlers maka ime ka o kwe omume. Kemgbe mmalite ya, Nkwụsị nri ejirila ihe karịrị nde nde weebụ wepụ nke ọma, ọnụ ọgụgụ a na-eto kwa ụbọchị.
3. Ozi ntanetị:
Ntucha na nbudata data na-emekarị na bọtịnụ ma ọ bụ na-emepụta ihe, n'enweghị nlekọta nke ụmụ mmadụ. Site na Ozi Nri-Nyocha, ị nwere ike ọ bụghị naanị nyochaa ibe weebụ ndị achọrọ kama ịwaa ebe nrụọrụ weebụ gị ma melite njụma ọchụchọ ya. Enwere ike itinye ya na software GitHub gị ma kwadoro maka ụlọ ọrụ, mmemme, na webmasters.
4. Ngwaahịa Mbinye Aka Nchịkọta Ihe
Ọ bụ ihe ọzọ dị ịtụnanya WordPress nke nwere ọtụtụ atụmatụ. Site na ikikere nke ikikere, ị nwere ike ibelata ọtụtụ ibe weebụ dịka ịchọrọ. Ngwaọrụ a na-enye akwụkwọ iji gosipụta ma ọ bụrụ na mmadụ na-ezu ohi ọdịnaya anyị. Ọ bụ dakọtara na saịtị WordPress niile na ntanetị onwe gị na-eme ka ị nweta data nke ọma na ọ dịghị oge. Ọzọkwa, ịkwesighi ịnwe mmemme ma ọ bụ nkà nhazi ma nwee ike irite uru na ọrụ a oge ọ bụla na n'ebe ọbụla.
Ọganihu GitHub malitere na October 2007. Enwere ike ịnweta ma ọ bụ megharịa ihe gbasara GitHub site na interface Git. Ọ na-eme ka anyị na-achọgharị ebe nchekwa ntanetị na ebe nrụọrụ weebụ ma rụọ ọrụ dịgasị iche iche. Ihe ntanetị n'elu nwere ike nyocha data site na ntanetị RSS, ebe nrụọrụ weebụ na-elekọta mmadụ, ntanetị akụkọ, ọpụpụ njem na blọọgụ onwe. I kwesịrị ịmepụta akaụntụ nkeonwe iji wepu data na usoro a choro, ma a na-elegharị ma na-ebudata ya na enweghị akaụntụ ọ bụla.